'साधारण लक्षण देखिएमा पनि टीका लगाउन नजाऔं, संवेदनशील बनौँ ' - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार १२:४६ |
( नर्स / अष्ट्रेलिया, मेलबर्न )
बडादशैं नेपालीहरुको लागि हर्ष, उल्लास र भेटघाटको चाड हो। यसपाली भने अरु वर्षहरुमा जस्तो खुलेर मनाउन नसकिने अवस्था छ। अष्ट्रेलियामा सरकारले सामाजिक दूरी बनाउन विभिन्न नियमहरु लगाएको छ भने उता नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले के भन्छ भन्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि आफू संवेदनशील बन्नुपर्छ। हो, दशैंमा पाका व्यक्तिहरुको आशिर्वाद लिइन्छ। तर त्यो आशिर्वाद लिन जाँदा हामीले उहाँहरुको स्वास्थ्य / जीवनलाई नै जोखिममा पारिदियौं भने ? सबै स्वस्थ रहेमा दशैं अर्को वर्ष पनि आउँछ र मनाउन पाइन्छ।
अष्ट्रेलिया, नेपाल जहाँकहीं रहेपनि आफूलाई कुनै सामान्य पनि लक्षण देखिएको छ या आफूलाई लाग्न सक्छ भन्ने शंका लागेको छ भने टीका लगाउन नजाऔं। अरुले के भन्छन् भन्ने भन्दा पनि यो सजग रहने समय हो। टीका लगाउन जाने र केही दिन पछि जांच गराउँदा टीका लगाउन गएको ठाउँमा पनि सरेको पाइएमा, झन् कस्तो महसुस होला ? या टीका लगाउन जाने ठाउँमा त्यहाँका व्यक्तिलाई संक्रमण भएको भएमा आफूलाई पनि सर्न सक्छ। आफ्नै स्वास्थ्य किन जोखिममा राख्ने ?
संक्रमण छैन भन्ने ढुक्क भएको अवस्थामा र स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड अपनाएर मात्र टीका लगाउन जाऔं। मैले काम गर्ने अस्पतालमा अहिले धेरै दिनदेखि यता बिरामीहरुमा कोरोना परिक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको छैन। तर हामीले पहिलेको जसरि नै पीपीइ लगाउँछौं, साथीहरुसंग र घरमा पनि पहिले नै जसरी सुरक्षा अपनाउँछौं। किनकी सानो लापरबाहीले पनि संक्रमण फेरी बढ्न सक्छ।
अहिले भर्चुअल माध्यमबाट जोकोहीसंग कनेक्ट हुन सकिन्छ। त्यसैले यदि संक्रमणको डर छ भने आफ्ना पाका उमेरका अभिभावकबाट भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गरौँ। भर्चुअल माध्यमबाट नै उहाँहरुको आशिर्वाद लिऔं।
अष्ट्रेलियामा सरकारको अहिलेसम्मको नियम अनुसार, घरमा जम्मा भएर रमाइलो गर्न पाइने अवस्था छैन। सिमित मान्छेहरुको समूहमा पार्कमा जम्मा हुन भने सकिन्छ। यी नियम हाम्रै लागि हुन् भनेर पालना गरौँ। फेरी, नियम तोडेमा सरकारले ठूलो जरिवाना पनि तोकेको छ।
मेरो परिवार तथा आफन्त नजिक नजिक नै हुनुहुन्छ। तर घरमा सबैजना जम्मा हुन नपाइने हुँदा पार्कमै टीका हुन्छ कि यसपाली ?
अन्त्यमा, सबैलाई दशैंको शुभकामना।
Previous‘अष्ट्रेलिया जाउली माया, मारौली इङ्ग्लिसैमा बात’
Nextयसरि बनाउनुहोस् स्वादिलो खसीको खुट्टाको सुप (भिडियो)
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा आज पनि नयाँ संक्रमितको संख्या शुन्य !
१९ कार्तिक २०७७, बुधबार ०८:२२